Ezona nkonzo zeArhente ziBhalisiweyo
Wonke urhulumente unembopheleleko esemthethweni yokuba amashishini abenomenzeli obhalisiweyo. Oku kuyinyani kuqaliso, amashishini amancinci, ii-LLC, kunye neenkampani.
Yintoni iarhente ebhalisiweyo?
Ezi nkonzo zinceda ekuqinisekiseni ukuthotyelwa ngokupheleleyo kukarhulumente wakho ngexesha lokuqalisa kunye nenkqubo yexesha elide yokusebenza kwakho. Ziyafumaneka ngeeyure zomsebenzi ukusingatha imbalelwano nee-arhente zikarhulumente egameni lakho. .).
Ukusilela ekugcineni inkonzo ebhalisiweyo yearhente kunokuba yingozi kwishishini lakho. Ngamanye amaxesha, urhulumente angalichitha ishishini ngokuvumela iinkonzo zalo zearhente ezibhalisiweyo ukuba ziphelelwe lixesha.
InAmanye amazwe unokwenza njengearhente yakho ebhalisiweyo. Kodwa oko kuthetha ukuba kuyakufuneka uthathe olu xanduva kwaye uhlala ufumaneka ngexesha lomsebenzi. Ikwaveza ulwazi lwakho lomntu siqu eluntwini, uninzi lwabantu olufuna ukuluthintela.
Kungenxa yoko le nto iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo zithandwa kangaka. Nokuba uqala ishishini elitsha okanye ufuna ukutshintsha iarhente ebhalisiweyo, esi sikhokelo siza kukunceda ufumane eyona nkonzo ibhalisiweyo yeshishini lakho.
IiNkonzo eziBhalisiweyo eziBhalisiweyo ezi-6 eziphezulu
Iarhente ebhalisiweyo eMantla ntshona
- Eyona nkonzo ibalaseleyo kubathengi
Ndwendwela uMntla-ntshona RA
Ukusuka $ 125 UkuThumela iMeyile yasimahla g Izikhokelo zeNkampani
Iifom zemo esele zigcwalisiwe
Nge "arhente ebhalisiweyo" egameni, akumangalisi ukubona
Ummeli obhalisiweyo oMantla ntshona
aphezulu kakhulu kuluhlu lwethu.
Ukusukela ekuqaleni ishishini lakho ukugcina ishishini lakho kunye nezikhokelo zeenkampani, le nkonzo yeenkonzo zearhente zibhalisiweyo zilandela enye. Kwii-LLC kunye neenkampani, iarhente ebhalisiweyo eMantla Ntshona iya kuba lukhetho lokuqala lokuthathela ingqalelo.
Banayo yonke into onokuyifuna okanye oyifunayo ngenkonzo yearhente ebhalisiweyo. Isicwangciso siquka izibonelelo ezinje: ukufikelela ukuhanjiswa kweposi simahla Ngemini enye yokuskena kwendawo
Uyakufumana inkxaso yenkxaso yobomi kuyo yonke inkampani ye-Agent's Registered Agent. Ezi ngcali zentengiso ziya kukunceda ukuba uqale kwaye ugcine ishishini lakho ngenkxaso edlula ngaphaya kokufikelela ngokwesiko kwearhente ebhalisiweyo.
Inkonzo ixabisa i $ 125 ngonyaka. Ukuba ufuna iarhente ebhalisiweyo kumazwe amahlanu okanye nangaphezulu, ireyithi iyehla iye kwi-100 leedola. Ezona nkonzo zeArhente ziBhalisiweyo zaSimahla
Iarhente ebhalisiweyo yasimahla yonyaka omnye
Ukuhlaziywa kwi $ 119
Ukuhambisa phambili kweposi
Ukuthumela i-imeyile kunye nezilumkiso zeSMS
Incfile yinkonzo yokudala ishishini enoluhlu olubanzi lokubonelelwa. Sele isetyenzisiwe ngaphezulu kwamakhulu amahlanu amawaka amashishini kule minyaka ili-15 idlulileyo. >
Kulungile Ukuba usebenzisa i-Incfile ukwenza i-LLC okanye inkampani yakho, uyakufumana iarhente yasimahla ebhalisiweyo kunyaka wokuqala.
Banenqanaba lokungena lephakheji yeSilivere ebiza $ 0. Kufuneka uhlawule kuphela iifizi zikarhulumente. kunye nezicwangciso zePlatinam ziqala kwi- $ 149 kunye ne- $ 299 ngokwahlukeneyo. Kodwa bobathathu beza nearhente ebhalisiweyo yasimahla.
Nanku ukujonga kwezinye zeempawu kunye namandla enkonzo ye-arhente ebhalisiweyo ye-Incfile.:
Iyafumaneka ukufumana imbalelwano yeposi ye-IRS kunye neenkqubo zomthetho egameni lakho
Izaziso ze-imeyile kunye nezeSMS xa ufumana amaxwebhu
24/7 ukufikelela kwi-intanethi Idashboard elula kunye nenomdla kwi-intanethi
ukuhambisa imeyile ngokuzenzekelayo
Umgca we-Incfile yedeshibhodi ekwi-intanethi ngokuqinisekileyo ume ngaphandle kwabanye kwintengiso yanamhlanje. Phakathi kokudluliselwa kweposi kunye nezilumkiso, le yinkonzo ekhethekileyo.
Ixabiso eliqhelekileyo lenkonzo ye-arhente ebhalisiweyo ye- $ 119. Ukuba ubhalisela esinye sezicwangciso zeshishini, isicwangciso sakho siyakuhlaziya ngelo nqanaba emva konyaka wokuqala wasimahla. Imirhumo yaseburhulumenteni.olona hlobo lubhalisiweyo ts
ngokundwendwela iSyft Filings
Iiarhente ezibhaliswe ukusuka kwi- $ 149
Ukufikelela kumaxwebhu akwi-intanethi
Ukugcinwa kwemfihlo kunye nokuthotyelwa okuqinisekisiweyo
lelinye igama elaziwayo nelithembekileyo kwilizwe learhente ebhalisiweyo. Banikezela ngeenkonzo kwii-LLC, i-C-Corps, i-S-Corps, kunye nemibutho engenzi nzuzo.
Ke ngaphandle kokujonga uhlobo lwento, ubungakanani beshishini lakho okanye ishishini lakho. Umsebenzi, oku kuya kuba kuhle ukhetho lokuqwalasela. Iifilitha zeSyft zineenkonzo zearhente ezibhalisiweyo ezikhoyo kuwo onke amazwe angama-50.
Ukuqalisa kulula. Gcwalisa ngokulula iphepha lemibuzo elikwi-intanethi ukubhalisa. Nje ukuba ubhaliswe, iSyft Filings isebenzisa itekhnoloji ezenzekelayo ekuthumela izikhumbuzo ngexesha elifanelekileyo ukuqinisekisa ukuthotyelwa. Inkonzoiqala kwi- $ 149 kwaye ihlaziye ngokuzenzekelayo. Ke ngekhe ubenexhala lokuphelelwa yinkonzo yakho.
Uhlawula kuphela isixa-mali kwaye awuzukuba naxhala malunga neendleko ezifihliweyo okanye iindleko ezingaphezulu. ukujonga ngokulula amaxwebhu asemthethweni alayishwe kwi-intanethi yiarhente yakho ebhalisiweyo. Le nkonzo ikhuselekile, inokuthenjwa kwaye ikhusela imfihlo yakho. Ezi phakheji ziqala nge- $ 49 kunye neefizi zikarhulumente. Nangona kunjalo, iarhente ebhalisiweyo ayifakwanga kwezi nkonzo.
Ukusuka kwi $ 99
Izicwangciso zoqeqesho ezibandakanyiweyo
Ubumfihlo noKhuseleko Ukuqalisa
yenye yegama elidumileyo nelidumileyo kwicandelo lokudala ishishini. Ngelixa inkampani iyaziwa kakhulu ngeenkonzo zabo zokwenziwa kwe-LLC, bakwabonelela ngeenkonzo ezibhalisiweyo ezibhalisiweyo.
Ukuba usebenzisa iZenBusiness ukuqala i-LLC, kuyavakala ukufumana iarhente ebhalisiweyo kubo.
Ezi nkonzo zearhente zibhalisiweyo ziya kuqinisekisa ukuthobela umthetho wakho. I-LLC. Yongeza umaleko wabucala kunye nokukhuseleka kwishishini lakho.
Iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo ziqala kwi- $ 99 ngonyaka. Kodwa ukuba usebenzisa iZenBusiness ukuqalaNjengenkampani, iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo zibandakanyiwe kuso sonke isicwangciso. Ezi zicwangciso ziqala kwi- $ 129, ke kusengqiqweni ukuqokelela iinkonzo kunye. Ukuba uqala i-LLC kwaye ufuna iarhente ebhalisiweyo, ungakhangeli ngaphezulu kweZenBusiness
. # 5 - MyCorporation - Ilungele amashishini amancinci
Ukuqala kwi- $ 120
Idiphozithi yasimahla ye-EIN ngoqeqesho
RA ebandakanywe nezinye iipakeji zoqeqesho
Ukuqalisa iMyCorporation sele ijikeleze ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ukusukela nge1998, bancedile ukwenza amashishini angaphezu kwesigidi kuwo onke amazwe angama-50.
Njengovulindlela kunye nenkokeli kolu shishino, iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo zeMyCorporation zilungele amashishini amancinci okuqala.
Ukuqalisa kulula. Yiya nje kwiwebhusayithi kwaye ugcwalise ifom ekhawulezileyo ngo-umgca. I-MyCorporation ibonelela ngeenkonzo zearhente ezibhalisiweyo kwii-LLC kunye nemibutho.
Nantsi into oza kuyifumana Ngale nkonzo: Yamkela amaxwebhu asemthethweni nawasemthethweni egameni lakho Hlela amaxwebhu akho
Dlulisa amaxwebhu asemthethweni kumnini weshishini Yongeza ukugcinwa kwemfihlo
Fumana inkonzo yokuqhubekeka yeshishini lakho xa 'inyathelo lezomthetho
iarhente ebhalisiweyo Iinkonzo kwi-MyCorporation ziqala kwi- $ 120. Izinga lihlaziya ngokuzenzekelayo rhoqo ngonyaka. Unokongeza i-MyIncGuard kwisicwangciso sakho, esibandakanya izikhumbuzo kunye nezixhobo unyaka wonke.
Kwabo baqala ishishini elitsha, iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo zibonelelwa njengesiqhelo kwiiphakheji zeDeluxe kunye nePremiyamu. Oku kuqala kwi- $ 224 kunye ne- $ 324 ngokwahlukeneyo. Ukuba usebenzisa iMyCorporation ukuqala ishishini lakho,
uya kufumana idiphozithi ye-EINsimahla
# 6 - MyCompanyWorks -Elungele ukutshintsha iiarhente ezibhalisiweyo
Ukuqala kwi- $ 99
Akukho tshintsho kwimirhumo yearhente
Uqeqesho lweNkampani ye-LLC kunye neCorps
100% Isiqinisekiso sokwaneliseka
lolunye ukhetho oludumileyo kwicandelo lokuyila ishishini. Babonelela ngoqeqesho kunye neenkonzo zearhente ezibhalisiweyo ze-LLC, c-Corps kunye ne-s-Corps.
iMyCompanyWorks ibonelela ngeenkonzo zearhente ebhalisiweyo kuwo onke ama-50. Ndiyayithanda iMyCompanyWorks kuba ixhaphake kakhulu. Iinkonzo zilungele wonke umntu oqala ishishini elitsha kunye nabanini bamashishini abafuna ukutshintsha iarhente yabo ebhalisiweyo kwishishini labo.Ise ise ikhona.
Izibonelelo zeenkonzo zearhente ezibhalisiweyo ezivela kulo mboneleli zibandakanya: hlaziya
Izaziso ezikhawulezayo zokuhanjiswa kwenkqubo, iifom, njl. 99 ngonyaka.
Ukuba ishishini lakho sele limiselwe kwaye ujonge ukutshintsha iarhente yakho ebhalisiweyo, iMyCompanyWorks ayenzi njalo. Ukubiza imali engaphezulu kolu tshintsho. Ngenye indlela, ungongeza inkonzo kwenye yezinye izicwangciso zoqeqesho, eziqala kwi- $ 79. Ungayifumana njaniIinkonzo zearhente ezibhaliswe kakhulu kuwe Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, ayizizo zonke iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo ezifanayo. Olunye lolo khetho ngokuqinisekileyo lubhetele kunezinye. Ngokukhetha okuninzi ekufuneka kuqwalaselwe, kunokuba nzima ukufumana eyona nkonzo ibhalisiweyo yeshishini lakho. Kukho izinto ezithile ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uvavanya iinkonzo ezahlukeneyo. Ukugcina oku kulandelayo engqondweni njengoko uzulazula kuya kwenza ubomi bakho bube lula kakhulu: Okanye loluphi uhlobo lombutho onalo ngoku?
Uninzi lweearhente ezibhalisiweyo ziya kusebenza nazo zonke iintlobo zamaziko, kodwa ezinye zilungele ngokucacileyo kunenye kunenye. Ii-LLCs azinakusebenzisa inkonzo ebhalisiweyo efanayo njenge-S-Corp. Ezinye iiarhente ezibhalisiweyo zingcono kwimibuthoengenzi nzuzo. Yimba nzulu kancinci ukuze ubone ukuba zeziphi iintlobo zezinto ezibhalisiweyo oceba ukusebenza nazo. Ukuba basebenza neenkampani ezifanayo nezakho, oku kufanele ukuba kube sisisombululo esihle.
Ezona nkonzo zibhalisiweyo zearhente ziya kukunceda ugcine ukuthobela imithetho yelizwe kunye nomanyano.
Khangela inkonzo eza kukuthumela i-SMS okanye izikhumbuzo ze-imeyile ukuze uqiniseke ukuba awuphosi nayiphi na imihla ebekiweyo okanye iimfuno. Ezinye iinkonzo zivela kwizinto ezongezelelweyo kunye nezikhokelo zokuthobela. Kulula kakhulu ukuxelela umahluko phakathi kwenkonzo yearhente ebhalisiweyo eyenza kuphela ubuncinci obungenanto kunye nezo zihamba imayile ethe chatha. iarhente ebhalisiweyo. Idilesi yearhente ebhalisiweyo iya kudweliswa njengerekhodi loluntu, hayi idilesi yasekhaya okanye yeofisi.
AmaxwebhuImbalelwano yezomthetho kunye nekarhulumente inokuququzelelwa kusetyenziswa iarhente ebhalisiweyo. Abanye baya kunika ukuthunyelwa kweposi ngokuchasene nokugcinwa kweposi kuphela. Abanye baya kulayisha ngokukhuselekileyo amaxwebhu kwideshibhodi ekwi-intanethi onokufikelela kude nayo.
IiNkonzo zoPhuhliso lweShishini Uninzi lwabantu abafuna inkonzo yenkonzo ebhalisiweyo baqala ishishini elitsha. Iyavakala into yokusebenzisa inkampani enye kuzo zombini ezi nkonzo. Abanye baya kunika unyaka simahla weenkonzo ezibhalisiweyo zearhente xa ubhalisela isicwangciso sokuqala.
Ukuba sele uneshishini esele likho kwaye ufuna nje ukutshintsha iarhente yakho ebhalisiweyo, iinkonzo zokuqalisa ishishini ziya kuthi ungabalulekanga
Ixabiso lentengo yeenkonzo zearhente ezibhalisiweyo zihlala zehla nge-100 leedola ngonyaka. Unokufumana i- $ 50 ngaphezulu okanye ngaphantsi. Kodwa xa uthetha jikelele, awufanelanga ukuba ubhatale ngaphezulu.
Ezinye iinkampani zisebenzisa igqwetha labo njengearhente ebhalisiweyo. Kodwa kuyakubiza imali eninzi kakhulu xa kuthelekiswa neenkonzo eziqwalaselweyo kwesi sikhokelo.
Ukuba ubopha inkonzo yakho yearhente ebhalisiweyo ngesicwangciso sokuqalisa ishishini (njengoko kuchaziwe ngaphambili), oku kuhlala kuyinto efanelekileyo. umlinganiselo wentsebenzo. Inkxaso Ummeli wakho obhalisiweyo kufuneka abekhona ukukunceda ukuba unemibuzo okanye ufuna uncedo. le yinto ebalulekileyo kwaye ihlala ihoywa yearhente yovavanyo ebhalisiweyo. Ndikucebisa ukuba ufunde uphononongo lwabathengi ngaphambi kokwenza isigqibo sokugqibela. Uninzi lwabavavanyi luyakhankanywaiya kuba nento yokwenza noncedo (nokuba lulungile okanye lubi). La magqabantshintshi anokukunceda ukukuhambisa ngandlela thile ukuba uphakathi kwezinto ezininzi onokukhetha kuzo.
Yeyiphi eyona nkonzo ibhalisiweyo ebhalisiweyo? Kuxhomekeka kwinto oyikhangelayo.
Ummeli obhalisiweyo oMntla ntshona lukhetho lwethu oluphezulu kwinkonzo yabathengi njengoko behamba ngaphezulu nangaphaya ukuhlangabezana neemfuno zakho. I-Incfile ibonelela ngeenkonzo zearhente ezibhalisiweyo simahla xa ubhalisela iphakheji yokuqalisa ishishini. I-Swyft Filings icwangcisa ukulungiselela zonke iintlobo zamashishini.
Ukuba wenza i-LLC, jonga iinkonzo zearhente ezibhalisiweyo ezinikezelwa yiZenBusiness. Amashishini amancinci kufuneka ajike kwiinkonzo zeMyCorp. Kwabo bafuna ukutshintsha iiarhente ezibhalisiweyo, iMyCompanyWorks ayihlawulisi umrhumo wokutshintsha.
Nokuba ujonge uhlobo lweshishini lakho okanye bUkuba kunjalo, ungayifumana eyona nkonzo ibhalisiweyo kuwe ngokulandela iingcebiso kwesi sikhokelo.
Indlela yokwenza inyathelo ngenyathelo lesikhokelo kwindawo ye-wordpress yabaqalayo
2021-06-24 14:37:13 | Indawo yewebhu
Ukuzama ukuqonda indlela yokwakha iwebhusayithi? Isikhokelo esilula, esinyathelo-nge-nyathelo sokuCwangciswa kweWebhusayithi ngabaPhuhlisi beWebhu abazenzele amakhulukhulu eewebhusayithi kwaye banceda amawaka abanye ukuba bazakhele ezabo. Izizathu ezi-6 zokuba usithande esi sikhokelo sokumisela iweb...
Iitemplate ezili-11 ezilungileyo ze-vuetify [simahla kunye nepremiyamu] 2021
2021-06-24 14:26:43 | Indawo yewebhu
Uphendlo lwakho lweemodeli ezithembisayo kunye nefuthe leVuetify ngoku liphelile. Sikuzisa ingqokelela yezixhobo onokuzisebenzisa ukuseka nayiphi na iprojekthi yewebhu okanye usetyenziso osebenza kulo. Eli lilayibrari yecandelo loYilo lweVue. js, ekunika yonke into nayo yonke into ukwakha izinto ezi...
Imixholo ephezulu yama-30 + yeecospto cryptocurrency
2021-06-24 14:19:57 | Indawo yewebhu
Ukuba ngumthathi-nxaxheba we-ICO Niche ngumbono omkhulu kunye nethuba lokuba ngusomashishini ophumeleleyo ngenxa yokuthandwa kwayo. Silapha ukuba nesiqalo kunye namashishini ngokusungulwa kwewebhusayithi kunye nokuhlaziywa koyilo Jonga izihloko ezingama-30 eziGqwesileyo ze-Crypto ze-ICO ze-WordPress...
Khokela iqela lokuthengisa elahlukileyo nelibandakanyayo
2021-06-24 12:27:25 | Indawo yewebhu
Eli nqaku liyinxalenye yothotho olukhulu olujolise kukwahluka kunye nokulingana kwintengiso. Njengenkampani, sizibophelele ekuchongeni amanyathelo esinokuwathatha ekulweni ubuhlanga nokungabi nabulungisa, kwaye nokwenza ilizwi le-BBIPOC liviwe kubaluleke kakhulu ekuvuseleleni utshintsho. Landela kwa...
Isikhokelo saBaqalayo kuQeqesho lwaBasebenzi
2021-06-22 22:51:45 | Indawo yewebhu
Uqeqesho lwabasebenzi lubalulekile ekugcwaliseni ulwazi kunye nemisantsa yetalente, ukuphucula ukusebenza kwiindawo ezithile zeshishini nakwimisebenzi, kunye nokunyusa ukoneliseka komsebenzi kunye nokuziphatha. Kodwa iishedyuli zabasebenzi ezixakekileyo, abasebenzi abasasazekileyo, kunye neendlela e...
Iinkonzo eziBalaseleyo ze-LLC
2021-06-22 22:44:13 | Indawo yewebhu
Oosomashishini abaninzi bakhetha ukwenza i-LLC ukwenza ukwahlula phakathi kwabo kunye namashishini abo ngokwembono yamatyala. Abanini beenkampani ezinamatyala athile abanakubekwa tyala ngokwabo kumatyala eshishini kunye nokugwetywa. Kukho iindlela ezininzi zokuseka i-LLC. Oku kunokoyikisa koosomashi...
Isikhokelo sabaQalayo sokuSebenza kwePhepha lokuSebenza
2021-06-22 22:37:15 | Indawo yewebhu
Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiphepha lokufika eliyimpumelelo ngumthengi ekujoliswe kuye. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba awufumani bantu abafanelekileyo ukuba beze kumaphepha akho kwasekuqaleni, yonke imizamo yakho inokunyuka njengomsi. Indlela emfutshane: i-personas. Iifayile zomntu ziipr...
Uyenza njani inkqubo yokuhanjiswa kwabasebenzi
2021-06-22 22:29:24 | Indawo yewebhu
Eyona ngxaki inkulu abanayo abantu ngokwenza inkqubo yokuhanjiswa kwabasebenzi kukufumana impumelelo yexesha elide. Ngelixa iinkqubo zokudlulisa zihlala ziqala nge-buzz eninzi kunye nemincili, ukuzigcina ziphumelele kwixesha elifutshane kunzima. Emva kokufunda inkqubo yethu "njani", uyayazi indlela ...
Isikhokelo sabaQalayo sokuHlawula amaXesha
2021-06-21 00:04:35 | Indawo yewebhu
Ugqiba njani ukuba ixesha lokuhlawula ngeveki, ngeeveki ezimbini, okanye ngeveki, okanye indibaniselwano yezi zintathu iya kuba lelona xesha lifanelekileyo lokuhlawulwa kweshishini lakho? Kodwa ufuna imvamisa etsala kwaye igcine abadlali abaphezulu kunye neebhalansi iindleko zolawulo ngeenjongo zola...
Isikhokelo sabaqalayo kubasebenzi abakude
2021-06-21 00:02:12 | Indawo yewebhu
Ngelixa ukusebenza kude bekukade kunqabile kumashishini, oku kutshintshe kakhulu kwimbali yakutshanje. Izifundo ezenziwa ngu-economist waseStanford uNicholas Bloom zibonisa ukuba ukusukela nge-Juni 2020, i-42% yabasebenzi e-United States babesebenza ngokusisigxina ekhaya. Ngelixa la manani kusenokwe...
Yila iphepha elifanelekileyo lokufika usebenzisa izinto ezibangela ingqondo
2021-06-20 08:35:45 | Indawo yewebhu
Injongo yephepha lokufika kukwenza ukuba iindwendwe zithathe inyathelo, nokuba kukuthenga imveliso, ukujoyina uluhlu lwe-imeyile, ukuqala isilingo sasimahla, okanye enye into. "" Kuya kuphumelela. Udinga isicwangciso esikhokela iindwendwe ekuthatheni inyathelo elifunekayo. Indlela enye yokwenza iind...
Indlela yokuseka izibonelelo zabasebenzi
2021-06-19 20:20:24 | Indawo yewebhu
Nokuba ubungakanani beshishini, enye yeendlela ezilungileyo zokugcina abasebenzi bonwabile, benyanisekile kwaye benemveliso zizibonelelo ezinkulu. izibonelelo zabo, okanye ukuba irekhodi lesibonelelo alichanekanga, kuyabaphazamisa abo babini. Ukuba nenkqubo ecacileyo yokuseta kwinkqubo yakho yezibon...
Isikhokelo saBaqalayo kwiZicwangciso zeBhonasi yabaSebenzi
2021-06-19 20:14:34 | Indawo yewebhu
Izicwangciso zebhonasi zabasebenzi ziyindlela enkulu yokukhuthaza abasebenzi bakho ukuba baphucule okanye bagcine ukusebenza kwabo emsebenzini ukuze bafezekise iinjongo zeshishini elitsha. Kodwa ukwakha isicwangciso sebhonasi esilungileyo nesikhuthazayo kunokuba luncedo. Imibutho kufuneka ibambe ibh...